Dadka Iibinta Ma Lagu Bedelayaa Robotyo? | Martech Zone
Dadka Iibinta Ma Lagu Bedelayaa Robotyo?
Jimco, Juun 14, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Senraj Soundar
Ka dib markii Watson uu noqday horyaalkii halista, IBM la shaqeeyay Cleveland Clinic si looga caawiyo dhakhaatiirta inay dedejiyaan oo ay hagaajiyaan heerka saxda ah ee cudurka iyo dawooyinka ay qoreen. Xaaladdan oo kale, Watson wuxuu kordhiyaa xirfadaha dhakhaatiirta. Marka, haddii kumbuyuutar uu gacan ka geysan karo fulinta howlaha caafimaadka, hubaal waxay umuuqataa in qofku caawin karo oo uu horumarin karo xirfadaha iibiyaha sidoo kale.
Laakiin, kumbuyuutarka waligiis ma beddeli doonaa shaqaalaha iibka? Macallimiinta, wadayaasha, wakiilada safarka, iyo turjubaano, dhammaantood waa ay heleen mashiinada casriga ah dhex gasho safkooda. Hadday 53% howlaha iibiyeyaashu yihiin automatable, iyo 2020 macaamiisha ayaa maamuli doona 85% xiriirkooda iyagoon la macaamilin bini aadam, taasi ma waxay ka dhigan tahay in robotyadu qaadan doonaan boosaska iibka?
Dhinaca sare ee qiyaasta saadaasha, Matthew King, Madaxa Sarkaalka Horumarinta Ganacsiga ee Pura Cali Ltd, ayaa sheegay in in 95% dadka wax iibiya lagu beddeli doono caqli macmal ah 20 sano gudahood. Washington Post waxay leedahay qiime hooseeya a maqaalkii ugu dambeeyay halkaas oo ay soo xiganayaan warbixin 2013 Jaamacadda Oxford oo sheegaysa in ku dhowaad nus ka mid ah kuwa hadda ka shaqeeya Mareykanka ay halis ugu jiraan in lagu beddelo otomaatiga tobanka sano ama labada sano ee soo socota - calaamadeynta jagooyinka maamulka oo ah kuwa ugu nugul. Xitaa Xoghayihii hore ee Maaliyadda, Larry Summers, ayaa dhawaan sheegay in illaa dhowr sano ka hor, uu u maleynayay in reer Luddites ay ku jiraan dhinaca qaldan ee taariikhda taageerayaasha tikniyoolajiyaduna ay ku sugan yihiin midig. Laakiin, ka dib wuxuu sii waday inuu dhaho, Si buuxda uma hubo hadda. Marka, sug! Dadka wax iibiya miyay ka walwalaan?
Waxaan rajeyneynaa, inay tahay arrin la shaqeysa oo aan laga soo horjeedin. Iibiyaha Einstein waa barnaamij sirdoon macmal ah (AI) kaas oo kuxiran isdhexgal kasta oo lala yeesho macaamiisha iyo waliba diiwaan gelinta macaamiisha si dadka wax iibiya ay u ogaadaan goorta ay dhahayaan waxa saxda ah waqtiga saxda ah Salesforce waxay iibsatay shan shirkadood oo AI ah oo ay ka mid yihiin, TempoAI, MinHash, PredictionIO, MetaMind, iyo Implisit Insights.
MinHash - madal AI iyo caawiye caawiye si looga caawiyo suuqleyda inay horumariyaan ololeyaasha.
Tempo - qalab jadwalka casriga ah ee AI-wada.
Saadaasha - kaasoo ka shaqeynayey keydka barashada mashiinka il furan.
Dareen Aragtida - wuxuu baaraa emaylka si loo hubiyo in xogta CRM ay sax tahay waxayna caawisaa saadaalinta marka iibsadayaashu ay diyaar u yihiin inay xiraan heshiiska.
MetaMind - waxay abuureysaa barnaamij waxbarasho oo qoto dheer oo ka jawaabi kara su'aalaha la xiriira xulashada qoraalka iyo sawirada qaab ku dhow dhow jawaabta aadanaha.
Salesforce maahan midka kaliya ee ciyaarta AI ah. Dhawaan, Microsoft ayaa heshay SwiftKey, sameeya kumbuyuutar AI ku shaqeeya oo saadaalinaya waxa la qorayo, iyo sidoo kale Shaybaarka Wand, soosaaraha AI ee ku shaqeeya chatbot iyo teknoolojiyada adeegga macaamiisha, iyo Genee, Kaaliyaha jadwalka casriga ah ee AI ku shaqeeya.
Sidii Matthew King yidhi:
Kuwani dhammaantood waa qalab falanqeyn kara dareenka macaamilka ee ku jira iimayl ama wadahadal taleefan, si dadka wax iibiya iyo wakiillada adeegga macmiilku u ogaadaan sida macaamiishoodu u dareemayaan iyo sida ay uga falceliyaan su'aalaha qaarkood ama dardargelinta. Tani waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay aragti ka helaan sida loo sameeyo ololeyaal wanaagsan iyadoo la beegsanayo dadka waqtiga saxda ah iyadoo la marinayo farriinta saxda ah iyadoo lagu saleynayo dookha gaarka ah iyo dabeecadaha isticmaalehaas.
Laakiin, tikniyoolajiyaddan oo dhan ma beddeli doontaa qof iib ah? Washington Post na xusuusinayaa shaqadani waxay ka faa'iideysatay waxsoosaarka wax soo saarkii qarniyadii 19aad iyo 20aad oo dhan iyadoo ay la socoto horumarka tikniyoolajiyadda Marka, malaha waxay noqon doontaa arrin dad iibiya ay ka wada shaqeeyaan aalado si ay shaqada si fiican ugu qabtaan
Fadlan xusuusnow dadku wax bay ka iibsadaan ilaa iibsadayaashu ay yihiin aalado aan dan ka lahayn inay wax ka iibsadaan aalado. Laakiin, dhab ahaan robotyadu waa halkan waana ku fiican tahay inaad la shaqeyso oo aadan khalad isku mid ah sameynin John Henry: Ha isku dayin inaad ka fiicnaato mashiinka, ka dhig mashiinka inuu caawiyo iibiyaha. U ogolow mashiinku inuu qariyo xogta iyo iibiyaha heshiiska.
Tags: aisirdoonka macmalchatbothiddefikrado abuurisxagaaga larryMatthew KingmetamindMicrosoftminshashsaadaalintaPura CaliKordhinta IibkaiibinIibiyaha Einsteinjadwalkaxoghayaha khasnaddadeg deg ahwaqtigaJaamacadda OxfordwaddlabsWashington Post
Senraj wuxuu hogaamiyaa kooxda maamulka at Ku Xidhnow Hogaamiyaha dhanka hadafka koowaad ee "heer sare injineernimada iyo adeegga macaamiisha ee weyn". Kahor ConnectLeader, wuxuu aasaasay laba shirkadood oo adeegyo softiweer ah oo guuleysta oo ka shaqeeyay in ka badan boqol shaqaale Mareykanka oo dhan ah waxayna soo saareen macaamiisha macaamiisha wax soo saare barnaamijyo casri ah Senraj wuxuu shahaadada MS ka qaatay shahaadada sayniska kombiyuutarka (oo maamuus sare leh) kana qaatay jaamacada Massachusetts iyo shahaadada BS ee injineernimada korantada ee jaamacada Anna, Chennai, India. Sannadkii 1992, Senraj wuxuu helay abaalmarinta 'Abaalmarinta Teknolojiyada Qaranka' ee uu ka helay Madaxweynaha Hindiya hal-abuurka ugu wanaagsan dalka.
ConnectLeader TopRung: Gam2 Sales Gamification iyo Qalabka Waxqabadka Maareynta
Mawduucyada Farriin kasta oo qoraal ah oo aad ugu baahan karto ganacsigaaga